BBC Somali - Warar - Lix lagu diley dagaal qabiil Kenya
Lix lagu diley dagaal qabiil Kenya
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 30 Luulyo, 2012, 16:40 GMT 19:40 SGA
dagaal qabiil ayaa ka dhacey Mandera
Degaano ku yaala Mandera oo ka tirsan Kenya ayaa waxa ka dhacay dagaalo u dhexeeya laba beelood oo Somali ah, oo ilaa lix ruux ay ku dhinteen.
Xiisad ayaa weli halkaasi ka taagan sida uu BBC u sheegey Taliyaha ciidanka booliska ee degaanka Mathew Ekakoro.
Labada Mudane oo laga soo doorto degaanada ay colaadda ka socoto oo kala ah Mahamed Mohamud oo ah wasiir ku xigeenka tamarta ee Kenya iyo Cabdiqaadir Xuseen oo ah gudoomiyaha guddiga destuurka ee baarlamanka ayaa waxay ku baaqeen nabad.
Labada Mudane oo Nairobi joogo ayaa ugu baaqey labada qabiil inay joojiyaan dhiiga oo ay nabada u xishaan.
Mudanayaasha aya ka codsadey dowladda inay ciidan halkaasi u dirto.
Waxay sheegeen inay la kulmeen saraakii sar-sare ee dowladda oo uu kujira wasiirka difaaca Yusuf Xaaji.
Mudane Maxamd Maxamuud ayaa BBC u sheegey in xiisadani dagaal ay ka soo gudubtey dhinaca Ethiopia oo ay bilihii ugu dambeeyey ay ka socdeen dagaal u dhexeeyey labada qabiil.
21 Mey 2013